Fampiharana Android 5 hijerena raha misy olona mifandray amin'ny WiFi | Androidsis
Fampiharana Android hijerena raha misy mifandray amin'ny WiFi-ko
Ny zavatra mety hitranga indraindray dia ny olana amin'ny Internet amin'ny tranonao no miteraka olana. Saingy tsy misy lesoka amin'izany ary na dia miantso ny mpandraharaha aza ianao dia ho hitany fa tsy misy lesoka izany. Amin'ireny tranga ireny dia toa misy mangalatra WiFi anao. Mampalahelo fa zavatra mitranga izany, ary raha te hanamarina isika raha marina ny ahiahinay, afaka mampiasa fampiharana android vitsivitsy izahay.
Noho ireo rindranasa ireo dia afaka manamarina raha misy olona mahazo fidirana amin'ny WiFi. Araka izany, afaka manova ny teny miafintsika isika ary mampitombo ny fiarovana ny tambajotra WiFi antsika hisorohana ny fiverenany indray. Manana fampiharana vitsivitsy ho an'ny Android izahay, fa nifantina izay tsara indrindra izahay.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny pAzontsika atao ny mamantatra raha misy olona mifandray amin'ny WiFi amin'ny fomba tsotra sy maimaim-poana. Araka izany, afaka mandray andraikitra isika mba tsy hiverenan'ireto karazana toe-javatra ireto ary tsy misy olona mampiasa ny tamba-jotra raha tsy mahazo alalana aminay.
1 Iza no ao amin'ny WiFi-ko
3 Fitaovana IP: WiFi Analyzer
4 Iza no mampiasa Wifi ahy
5 Detector mpangalatra WiFi
Iza no ao amin'ny WiFi-ko
Ny anaran'ny fampiharana dia milaza amintsika ny zava-drehetra. Iray amin'ireo fanta-daza indrindra amin'ny sokajy misy azy io. Azo antoka fa miavaka amin'ny maha-mandaitra azy ary miasa tsara. Misaotra an'io fa ho hitantsika izay nifandray tamin'ny tamba-jotra taminay raha tsy nahazo alalana taminay. Misongadina indrindra izy satria haingana be, Ka segondra vitsy monja dia ho hitany raha misy olona mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi misy alalana aminay.
Tsara homarihina koa fa mora ampiasaina. Tsotra sy madio ny interface tsara, noho izany dia mazoto be ny fampiasana azy. Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ary koa, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Iray amin'ireo anarana malaza indrindra amin'ity karazana fampiharana ity. Ny fampiharana dia miavaka amin'ny fiasana toy ny hatsarana sy ho mora ampiasaina. Tsotra ny interface ary misy mpampiasa afaka mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izay, ho haingana izy io lazao raha misy olona mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi anay tsy nahazo alalana taminay. ihany koa holazaina amintsika hoe karazana fitaovana inona no mifandray. Ka manana vaovao be dia be izahay.
Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ary koa, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Fing - Scanner an'ny tambajotra
Developer: Fing voafetra
Fitaovana IP: WiFi Analyzer
Iray amin'ireo Fitaovana feno kokoa ho an'ny fiarovana ny fifandraisana WiFi anao Inona no mety ho hitantsika Tsy misy isalasalana, safidy tsara ho an'ny mpampiasa Android. TENA asa maro samihafa, ao anatin'izany ny fahitana raha misy olona mifandray amin'ny tambajotranay. Saingy, misongadina indrindra izy amin'ny fiasa isan-karazany atolotray antsika manatsara ny WiFi anay ary manatsara ny fiarovana anao. Fitaovana lehibe.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na izany aza, ao anaty ny fampiharana dia mahita fividianana sy dokam-barotra izahay.
Iza no mampiasa Wifi ahy
Fampiharana iray hafa izay nanjary nalaza tamin'ny Android. Inona koa, manana naoty tsara avy amin'ny mpampiasa, izay zava-dehibe ihany koa. Averina indray, ny tena asan'ity fampiharana ity dia ny hahitana haingana raha misy olona mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi anay. Manao ny asany lavorary amin'ny fotoana rehetra izy io. Ho fanampin'izay dia misy a famolavolana izay manamora ny fampiasana azy. Safidy tsara hafa koa io.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay.
Iza no mampiasa ny Wifi. Fitaovana ao amin'ny tamba-jotra
Detector mpangalatra WiFi
Ny safidy farany ao amin'ilay lisitra dia manao ny asany indray. Manampy antsika hamantatra raha misy olona mifandray amin'ny WiFi misy alalana aminay. Ny fampiharana dia manatanteraka tsara ny tanjona kendreny ary tsy manome olana ara-piasana. Ny famolavolana ny fampiharana dia tena ankehitriny. Zavatra manamora ny fampiasana azy.
Azo alaina maimaimpoana ny rindranasa Android. Ho fanampin'izay, tsy misy doka na fividianana ao anatiny.
Ity no safidintsika. Manantena izahay fa hanampy anao ireo rindranasa ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android hijerena raha misy mifandray amin'ny WiFi-ko
Jereo ny vaovao rehetra amin'ny Google Maps 9.70 beta